R/wasaare Gaas oo booqday naafada ciidanka xooga dalka, deeq daawooyin ahna gaarsiiyay cisbitaalka Martini. – Radio Daljir
R/wasaare Gaas oo booqday naafada ciidanka xooga dalka, deeq daawooyin ahna gaarsiiyay cisbitaalka Martini.
Agoosto 24, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Aug 24 – Ra?iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka KMG ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta booqday Naafada Ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha Isbitalkii Martini isagoo dhinaca kalena deeq daawo ah ku wareejiyay maamulka Isbitalkaasi Martini.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa u kuurgalay xaaladda nololeed ee ay ku noolyihiin Naafada xooga dalka Soomaaliyeed oo mudadii labaatanka sano deganaa gudaha Isbitalka Martini halkaasoo ay ku soo wajaheen duruufo nololeed oo aad u adag.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa naafada xooga dalka u sheegay inuu si gaar ah uga warqabi doono xaaladooda wixii xuquuq ahna ay heli doonaan maadaama ay hakad yar ka gashay wixii ka dambeeyey markii ay meesha ka baxday xukuumadii R.wasaare Farmaajo.
?Waan ku faraxsanahay inaan maanta hoygiina idinku soo booqdo anigoo u kuurgalaya xaaladiina, waxaana idiin sheegayaa inaad tihiin tiirarka dowladnimada maadaama aad naftiina u hurteen difaaca dalka, waxaana idiin balan qaadayaa inaad heli doontaan xuquuqdiina mid mushaar iyo mid nolol? ayuu yiri Ra?iisul Wasaare Dr. Cabdiweli Maxamed Cali.
Dhinaca kale, Ra?iisul Wasaaraha ayaa ku wareejiyay maamulka Isbitaalka Martini Deeq daawo ah oo ka timid shacabka iyo Dowladda aanu walaalaha nahay ee Jabuuti iyadoo safiirka dalka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Mr. Dayib Dubad Rooblena uu goob joog ka ahaa munaasabadan dawada lagula warejinayay maamulka Isbitaalka waxaana sidoo kale joogay Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dr. C/casiis Sheekh Yuusuf.
Daawadan ayaa qeyb ka aheyd dawo ay dowladda Jabuuti ugu talo gashay shacabka ay abaaruhu ku dhufteen ee Soomaaliyeed taasoo ka dambeysay kadib markii uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle.
Il-wareed Xafiiska R/wasaaraha.
“Ma jiro wax maamul ah oo aan kan Puntland ahayn oo ka jira deegaannada bariga fog, sida Caluula iyo Baargaal” Wasiirka beeraha & waraabka ee Puntland Eng. Bariij-kalo.
“Nadaafada, dhiraynta magaalada, iyo dhismaha wadooyinka ayaa noo qorshaysan” Duqa magaalada Bossaso.